Daawo Sawirada: Itobiya oo cir iyo Dhul ba ka weerartay Jabhada OLF Iyo Gudoomiyihii Jabhada oo la sheegay inuu Firxad ku galay is maamulka Tigrey. – Xeernews24
Daawo Sawirada: Itobiya oo cir iyo Dhul ba ka weerartay Jabhada OLF Iyo Gudoomiyihii Jabhada oo la sheegay inuu Firxad ku galay is maamulka Tigrey.
Ciidamada Milateriga dalka Itobiya ayaa maanta Guluf Weerar oo cir iyo dhulba ah kuqaaday Fadhiisimada ciidanka Jabhada OLF ee Gobolada Oromia.
Warku waxaa uu sheegayaa in Gobolada Arsi, Wollega iyo Gobolada dhexe ee Oromada inay maanta kabilawdeen dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada milateriga Itobiya iyo kuwa Jabhada OLF oo Gacan buuxda kahelaya shacabka.
Ilaa iyo Haatan si rasmi ah looma Oga khasaaraha kadhashay dagaalka culus ee cir iyo dhulba leh ee lagu Qaaday Jabhada Oromada oo haysata Taageerada shacabka Oromada 80%, waxaa se Lafilayaa in mamulka Oromadu kawarbixiyo dagaalka maadaama ay iyagu dalbadeen.
Gudomiyihii Jabhada OLF ayaa Da’ud Ibsa ayaa kusugan magalada Maqale ee xarunta mamulka Tigreega oo Nafta kula cararay, kadib markii xukuumada mamulka Oromada iyo tan Abiy Axmed ay Eedo culus u Jeediyeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/7.jpg 529 646 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-26 15:43:162018-12-26 15:43:16Daawo Sawirada: Itobiya oo cir iyo Dhul ba ka weerartay Jabhada OLF Iyo Gudoomiyihii Jabhada oo la sheegay inuu Firxad ku galay is maamulka Tigrey.
Shacabkii Reer Biki oo uu Muujiyey Walaahood reer Cundhufo sidday uga xun yihiin... Dhegeysi Haboon Is maamulkii Canfarta oo Afka Furtay kuna dhawaaqay in ay soo...